बाँकेमा १२ लाख पशुपन्छी छन् तर २ लाखको मात्र बिमा «
बाँकेमा १२ लाख पशुपन्छी छन् तर २ लाखको मात्र बिमा
बाँकेमा १२ लाखको हाराहारीमा पशुपन्छी भए पनि २ हजार ६ सय ७ पशुपन्छीको मात्र बिमा गरिएको पाइएको छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय बाँकेका अनुसार जिल्लाका २ सय ५० किसानले मात्र पशुपन्छी बिमाको सुविधा लिएका छन् ।
जिल्लामा दर्ता भएका ८ सय ३३ वटा पशुपन्छी फार्म भए पनि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा २ सय ५० किसानले आफ्ना पशुपन्छीको बिमा गराएका छन् । जबकि गत आर्थिक वर्षमा ३ सय ३१ जना कृषकले पशु बिमा गराएका थिए । आव ०७३÷७४ मा २ लाख २० हजार ४ सय ५३ गाई–भैंसी रहेकोमा १ सय ५४ जना कृषकले ४ सय १२ गाई–भैंसीको मात्र बिमा गरेकोमा यो वर्ष २ सय ५० किसानले ४ सय २१ को मात्र बिमा गरेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ ।
यस वर्षको ६ महिनामा ३५ जना किसानले २ सय ८२ भेडा बाख्राको बिमा गराएका छन् जबकि गत वर्ष बाँकेमा १ सय ५७ जना कृषकले २ सय ८३ वटा भेडाबाख्राको बिमा गराएका थिए । यहाँ ३ लाख १० हजार २ सय ५९ बाख्रा छन् ।
गत वर्ष बाँकेमा कुखुरा र बंगुरको बिमा नै नभएको पाइए पनि यो वर्षमा भने ५ जना किसानको ४४ वटा बंगुर र ५ जना किसानले १ हजार ८ सय ६० वटा कुखुराको बिमा गराएको पाइएको छ ।
बाँकेमा गत वर्ष २ करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँबराबरको पशु बिमा गरिँदा यो वर्ष त्यसमा दोब्बर रकमको बिमा गरिएको पाइएको छ । यो वर्ष ४ करोड ८० लाख ७० हजार बराबरको पशुधनको बिमा गरिएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. बेदराज केसीले नेपाल सरकारले पशुपन्छीको बिमाको रकम मन्त्रालयबाटै सिधै बिमा कम्पनीमा पठाइ दिने गरेको कारण बिमाको सेवा लिने किसान तथा दिने बिमा कम्पनीले अप्ठयारो पर्दा मात्र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा जानकारी दिने गरेकाले जिल्लामा पशुपन्छीको बिमाको यकिन तथ्यांक कार्यालयसँग पनि नभएको बताए ।
उनले भने, “सेवाग्राही अप्ठयारोमा परे भने मात्र सिफारिसका लागि कार्यालयमा आउने गरेको कारण यकिन तथ्यांक आउन गाह्रो भएको छ । कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीसँग सोधपुछ गरेर विमित पशुपन्छीका बारेमा तथ्यांक संकलन गर्ने गरेका छौं ।”
“पुशपन्छीको संख्याको तुलनामा बिमा गराउनेको संख्या एकदमै कम छ, बिमाको बारेमा जानकारी भए पनि यसप्रति कृषकले चासो राख्दैनन्,” केसीले भने ।
आव ०७३–०७४ मा एकजना पनि कुखुरा र बंगुरपालक कृषकले बिमा नगराएको भए पनि यो आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा ४४ वटा बंगुर र १ हजार ८ सय ६० कुखुराको बिमा भएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख डा. केसीले कुखुुराको बिमा गराउने र विमित रकम लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले कुखुरापालक कृषकले बिमा गराउन नमान्ने गरेको बताए । “एकदुइटा कुखुरा मरेमा विमा बापतको रकम नपाइने भएकाले कुखुरापालक कृषकले बिमा गराउन मान्दैनन्,” उनले भने ।
सरकारले पशु बिमाका लागि विशेष सहुलियत दिएको छ । कुल विमित रकमको ७५ प्रतिशत सरकार र २५ प्रतिशत रकम मात्र कृषकले बेहोर्ने प्रावधान छ । तर, बाँकेका पशुपालक कृषकको आकर्षण यसतर्फ बढ्न नसकेको वरिष्ठ पशु चिकित्सक केसीले बताए । “बिमाबाट हुने फाइदाका बारेमा सम्झाइ बुझाइ गर्दासमेत कृषकले मान्दैनन्,” उनले भने ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–५
अरुको जीवन बचाउन रक्तदान गरेर खुसी हुनेहरू
धादिङ-भनिन्छ ‘रक्तदान नै जीवन दान’ हो । तर कयौ मानिस रक्तदान गर्न मन भएर पनि
सीए उपाध्यायको निधन
वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तीर्थराज उपाध्यायको निधन भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ स्थापनामा महत्वपूर्ण